ဒေါ်ထားထားရဲ့ရမက်ပြင်း – Grab Love Story
ဖွာလက်စ ဆေးလိပ်ကို ပြာခွက်ထဲခဏချထားပြီး အောင်အောင် ဆိုင်ပြင်ဘက်သို့လှမ်းရှိုးလိုက်သည်။ အားပါးပါး တော်တော်ကိတ်တာဘဲလို့သူ့စိတ်ထဲကပြောလိုက်သည်။ ဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်သွားသူမှာ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်တို့သားအမိ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်နှင့်သူ့သမီးမေသက် သားအမိလိုထက်ညီအမလိုဖြစ်နေသည်။ ဆရာလေး တစ်ယောက်ထဲလား လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုမြကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကို လာချရင်းပြောလိုက်သည်။ ဒီည ဘောလုံးပွဲကောင်းတယ်နော် ဆရာလေး လာကြည့်မှာလား။ ဘာပွဲမို့လို့လဲ ကိုမြကြီးရဲ့။ မန်ယူနဲ့အာဆင်နယ်လေဗျာ။ ဟာဒါဆိုပွဲကောင်းဘဲ လာကြည့်ရမှာပေါ့။ အောင်အောင်က လက်ဖက်ရည်ကို တစ်ငုံသောက်ရင်းပြောလိုက်သည်။ဒီရွာမှာတစ်ခုတည်းတော ဘောလုံးပွဲပြရာရုံက ကိုမြကြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ရွာထိပ်က ကိုသောင်းအေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘဲရှိတာလေ။ အောင်အောင် ကားဒီ တောင်သာရွာနှင့် မိုင် ၃၀၀ လောက်ဝေးသည့်မြို့က။ ဒီရွာမှာ ကျောင်းဆရာလာလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်ကျောင်းပိတ်ရက်မြို့ပြန်ဦးမလားဆရာလေး။ အင်း ပြန်ဖြစ်မယ်မထင်သေးပါဘူး။ အဟဖဲ တို့ဆရာလေး ဒီရွာမှာ အချောအလှလေးတွေတွေ့နေပြီထင်တယ်။
ဒါကြောင့်ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်းမပြန်နိုင်တာ။ အဟား ကိုမြကြီးကတော့ပြောတော့မယ်။ စတာပါဆရာလေးရယ်။ ဆိုင်ထဲသို့ လက်ဖက်ရည်သောက်မည့် ကာလသားအချို့ဝင်လာသဖြင့် ကိုမြကြီး လက်ဖက်ရည်ဖျော်ရန်ထသွားသည်။ အောင်အောင်ရဲ့စိတ်တွေက အတိတ်ဆီကိုလွင့်မျှောသွားတယ်။ တကယ်တော့ သူမြို့ကိုမပြန်ဖြစ်သည်က ဒီလို့။ သား လာဦး။ အပြင်မှပြန်လာသောအောင်အောင် ဧည့်ခန်းမှဖခင်ဖြစ်သူဦးအောင်စိုးခေါ် သဖြင့် ပြောစရာရှိလို့ထင်ကာဧည့်ခန်းတွင်းသို့ ဝင်သွားလိုက်တော့ ဖခင်ဘေးနားမှာသူ့ထက် ၄ ၅နှစ်လောက်ဘဲကြီး မည့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်သဖြင့် သူ့ခြေလှမ်းများအနည်းငယ်တွန့်သွားရသေးသည်။ သားကိုမိတ်ဆက်ပေးမလို့။ ဒါ ဖေဖေနဲ့မကြာခင်လက်ထပ်တော့မဲ့သူ။ အောင်အောင်မျက်နှာတစ်ချက်တော့ပျက်သွားသည်။ သူလည်းဘွဲ့ရလူငယ်ပညာတတ်ဘဲလေ။ နားလည်ပါတယ် သူ့အပေါ် မိခင်မရှိကတည်းက ဖခင်လိုတစ်မျိုး မိခင်လိုတစ်မျိုးဂရုစိုက်ခဲ့သောဖေဖေကို။ သတင်းတွေတော့သူကြားနေတာကြာပြီ။ ဒီလောက်မြန်ဆန်လိမ့်မယ်လို့သူမထင်ခဲ့။ ဆော်ကြီးကအလန်းကြီးတော့အလန်းကြီးပင်။ နာမည်က ထားထားလို့သိရသည်။ သူခန့်မှန်းထားသလို သူ့ထက် ၅ နှစ်သာကြီးသည်။ သူလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။၂၈နှစ်တဲ့။ သူသဘောမတူလည်း ဖေဖေကယူမှာဘဲကို။ သားအဖနှစ်ယောက်ရှိသောအိမ်မှာ သူစိမ်းမိန်းမတစ်ယောက်ဝင်လာသဖြင့် အောင်အောင်အတွက် အနေကျုံ့သွားတာပေါ့လေ။ တစ်ခါတစ်ရံသူငယ်ချင်းများနဲ့ ညနက်အောင်လည်တာကအစဆင်ခြင်နေရသည်။
စောစောပြန်အိပ်ပေါ့။ ဒေါ်ထားထားကလည်းသူ့အပေါ် ကောင်းပါတယ်။ သူကြိုက်တတ်တဲ့ ထမင်း ဟင်းတွေ ချက်ကျွေးရတာနဲ့။ အမေလိုတစ်မျိုး အမလိုတစ်မျိုးသူ့အပေါ် သဘောထားပါတယ်။ သူလည်း ဒါကြောင့်ဒေါ်ထားထားပေါ် လေးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်အောင်တစ်ယောက် သူ့အယူအဆတွေမှားယွင်းခဲ့ ကြောင်းကိုဘယ်အချိန်ကျမှသိလိုက်ရသလဲဆိုတာကတော့။ နောက်နှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာပါ။ ဒါကလည်း မမြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာကြောင့်ဘဲလား တိုက်ဆိုင်မှုဘဲလားဆိုတာတော့ အောင်အောင်လည်း မပြောပြတတ်တော့ပါဘူး။ အောင်အောင်က ခွက်ထဲမှာထည့်ထားသောလက်ကျန်ဝီစကီကို မော့လိုက်ရင်း။ တော်ပြီကွာ သက်နောင် ဒီတစ်ခွက်ပြီးရင်။ ဟာ ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ကွာ။ သောက်ဦး။ သက်နောင်က ဝိစကီထပ်ထည့်ပေးသည်။ မနက်ဖြန်သက်နောင်သင်္ဘောလိုက်မည်။ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြသဖြင့် သက်နောင်က ဧည့်ခံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တော်ပြီနော်သူငယ်ချင်း ဒီတစ်ခွက်ပြီးရင်။ အေးပါ ကုန်လည်းကုနါပါပြီ။ သက်နောင်က ဝီစကီပုလင်း လက်ကျန်ကိုသူ့ခွက်အကုန်ထည့်လိုက်ပြီး ဒါနဲ့မင်းဖားသားကြီးမတွေ့ပါဘူး အခုတလော သြော် သူ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်သွားတယ်။
ဒါဆို မင်းမိထွေးကြီးဒေါ်ထားထားဘဲကျန်မှာပေါ့။ အင်း သူ့အမျိုးဆိုလားကောင်မလေး တစ်ယောကိခေါ်အိပ်တယ်။ ဒီအတိုင်းကသိတယ်မဟုတ်လား။ပတ်ဝန်းကျင်က။ အေးပေါ့ သူနဲ့မင်းနဲ့ကအသက်ခြင်းသိပ်ကွာတာမှမဟုတ်တာ။ သက်နောင်ကပြောရင်း လက်ကျန်ဝီစကီကိုမော့သောက်လိုက်သည်။ ဒါဆိုလည်းပြန်ရအောင်လေ။ ဟိုရောက်ရင်လည်း ဖုန်းဆက်နော်။ အေးပါဟ သက်နောင်ကပြောရင်း တစ်ဦးနှင်းတစ်ဦးနှုတ်ဆက်ကာလမ်းခွဲခဲ့ကြလေသည်။ အောင်အောင်လည်းသူ့အိမ်ဆီသို့ဆိုင်ကယ်မောင်းလာရင်း ခေါင်းများမူးလာသည်။ ဒီနေ့သောက်တာတော်တော်များသွားတာကိုး။ အိမ်ပြန်ရောက်အောင်မနည်းမောင်းခဲ့ရသည်။ ခြံရှေ့ရောက်တော့ ခေါင်းလောင်းကိုဆွဲပြီးအော်ခေါ်လိုက်သည်။အမထား အမထားတံခါးဖွင့်ပါဦး။ မူးယစ်ရီဝေလာသဖြင့်ခြံထောင့်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး တဝေါ့ဝေါ့အန်နေရသေးသည်။ အိမ်ထဲမှမီးများဖွင့်တာမြင်လိုက်ရပြီး မထားထားအပြင်သို့ တံခါးဖွင့်ပေးရန်ဆင်းလာတာကိုတွေ့ရသည်။ ဟွန်း ဒီကောင်လေးမူးလာပြီ မထားထားက စိတ်ထဲမှာတွေးရင်း ခြံဝင်းတံခါးကိုဖွင့်လိုက်သည်။
အမ..ကျွန်တော်နည်းနည်းများသွားတယ်ဗျာ.။ ဟင်း..လူငယ်ဆိုတာဒီလိုဘဲကွ.. ဒီလိုပျော်ပျော်နေတတ်တာကိုမထားကကြိုက်တယ်။ ဟုတ်ပါပြီ…မမထား..ဒါနဲ့ဟိုကောင်မလေးရောအိပ်ပြီလား။ ညနေကဘဲကွယ်…သူ့အမေနေမကောင်းလို့ဆိုလားပြန်သွားလေရဲ့.။ အောင်အောင်ကားတော်တော် မူးနေဟန်တူသည်။ ခြံအတွင်းသို့ ၀င်လာပြီးခြံထောင့်ကပန်းရုံနားမှာ တဝေါ့ဝေါ့အန်နေသေးသည်။ ဟား…ငါ့မောင်ကတော့ဖြစ်ရမယ်။ တော်တော်နဲ့မထနိုင်အောင်ဖြစ်နေသော အောင်အောင်ကိုကြည့်ပြီး မထားထားတစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်။ ထိုအပြုံးက အထာသိသောယောင်္ကျားများအတွက် ဘာအပြုံးလဲဆိုတာသိကြမည်။ ကဲ..သား လာလာ… မင်းမလဲမသောက်နိုင်ဘဲအများကြီးသောက်လာတာကိုး။ မထားထားက အောင်အောင်ဂျိုင်းအောက်မှ ၀င်ကာထမ်းလိုက်သည်။
အောင်အောင်ကိုယ်က ယိုင်နဲ့ကာ သူမကိုယ်ပေါ်မီကျလာသည်။ လာလာ..ငါ့မောင်အရမ်းမူးနေပြီ။ အားနာစရာကြီး မမထားရာ။ မထားထားက အောင်အောင်ကို တွဲခေါ်လာရင်း။ မင်း..မမထားကို မမထားလို့မခေါ်ပါနဲ့လား အောင်အောင်။ ဒါဆို ဘယ်လိုခေါ်ရမှာလဲ မမထား။ မင်းမမထားကို မေမေလေးလို့ခေါ်ပါလား။ ဟင်းဟင်း..မမထားက ကျွန်တော်နဲ့အသက်မှမကွာတာ။ မမထားခေါ်စေချင်ရင်ခေါ်မယ်လေ… မေမေလေး….ဟင်း..ဒါကြောင့်လဲမေမေလေးကမင်းကိုချစ်တာသိလား။ ခင်ဗျာ့။ ဟား…မမထားကကျွန်တော့်ကို နို့လဲတိုက်ဖူးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့။ အောင်အောင်ကား မူးမူးရူးရူးနဲ့လျှောက်ပြောချေပြီလေ။ ဒါသည်ကားဒေါ်ထားထားရဲ့ လိုလားချက်ကို ကွက်တိကျသွားစေသောစကားလိုဖြစ်မှန်းသူမသိ။ ဒါဆုို…သားကိုမေမေလေးက နို့စို့ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကောစို့မှာလား။ အောင်အောင်ကလည်းမူးနေသောကြောင့်ဘာမှမစဉ်းစား အို..စို့မှာပေါ့ တကယ်တိုက်မှာလား။ အိုခေ..ကြိုက်ပြီလေ..ဒီညကစလိုက်ရအောင်.. အခန်းထဲကျရင်စို့ခိုင်းမယ်။ အမှန်တော့မထားထားက အောင်အောင်ဖခင်ဖြစ်သူကိုငွေမက်သဖြင့်လက်ထပ်ခဲ့သော်လည်း ငယ်ရွယ်နုပျိုသူပီပီ အောင်အောင်အဖေ၏ အသက်အရွယ်ကြီးလာမှုကြောင့် သူမအလိုဆန္ဒများကို ကောင်းကောင်းဖြည့်မပေးနိုင်သဖြင့် လင်ပါသားအောင်အောင်ကိုလင်ငယ်တော်ချင်နေသည်။
အောင်အောင်က လူပေါက်ချောလေ.။ အပြင်လူနှင့်ဆိုလျှင်လူသိနိုင်သည်။ အိမ်ထဲမှာဆိုတော့ လူမသိနိုင်ဘူးလေ။ငယ်ရွယ်နုပျိုသောအောင်အောင်ကို သူမကြံစည်ခဲ့တာတော့အချိန်တော်တော်ကြာခဲ့ပြီ။ မထားထားက အောင်အောင်ကို သူမအခန်းထဲတွဲခေါ်လာသည်.။ အောင်အောင်ဖခင်ဦးအောင်စိုးနှင့် သူမအိပ်သော နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးပေါ်တွဲတင်လိုက်သည်။ မူးနေသောအောင်အောင်ကား သူ့ကိုသူဘာလုပ်လို့လုပ်မိမှန်းသိမယ်မထင်။ ဟင်း..ကောင်လေးအရမ်းမူးနေပြီ။ အကျီတွေကလည်းနံစော်လို့…မေမေချွတ်ပေးမယ်။ ခဏထိုင်ဦး။အောင်အောင်ကိုထူလိုက်ပြီး…အကျီကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်လှသော အောင်အောင်အပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးမထားထား ရမ္မက်ဇောတွေပိုကြွလာသည်။ နေဦးသားမေမေလေးသံပုရာရည်ဖျော်လိုက်ဦးမယ်။ အောင်အောင်ကိုပြန်လှဲစေပြီး..ဒေါ်ထားထားကသံပုရာရည်သွားဖျော်သည်. သံပုရာရည်ဖျော်ရင်း ခုနကသူမဖွတ်ပြီးယူလာသောဆေးမှုန့်များကို သံပုရာရေထဲ ထည့်ဖော်ျလိုက်သည်။ သူမသူငယ်ချင်း မေမီကျော်ထံမှယူထားသောဆေးမှုန့်များဖြစ်သည်။ လိုအပ်လျှင်အသုံးချရအောင်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်. မေမီကျော်က သူမနှင့်ငယ်သူငယ်ချင်း ၀ါသနာတူစရိုက်တူတွေ။ ယောင်္ကျားက သင်္ဘောသားဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသို့အမြဲသွားနေရသဖြင့် အမြဲတမ်းပျံလန်နေအောင်ပြင်ဆင်ထားပြီး အပျိုလိုနေသည်။ မေမီကျော်မှာ လင်ငယ်တစ်ယောက်ရှိပြီး လင်ငယ်ကို ထိုဆေးများကျွေးကာ လိုးခိုင်းဆော်ခိုင်းသည်ဟုသိရတယ်လေ။ ပြောရရင်တော့လိင်စိတ်ကြွဆေးများဖြစ်တော့သည်။
ယခုတော့ မေမီကျော်ထံမှအမှတ်မထင်တောင်းယူလာသော ဒီဆေးများကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချခွင့်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ အောင်အောင်ကား မကြာမီအချိန်အတွင်း သူမရဲ့လင်ငယ်အဖြစ် အသုံးတော်ခံရတော့မယ့်အချိန်မှာ ဒီဆေးတန်ခိုးနဲ့ပိုပြီးလိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတွေးမိပြီး မထားထားတစ်ယောက်သံပုရာရေထဲကို ဆေးမှုန့်များကို ပျော်ဝင်သထင်ပျော်ဝင်အောင်ဇွန်းနဲ့မွေရင်း ရမ္မက်စိတ်တွေကြွတက်လာပြီး အဖုတ်မှအရည်များပင်စိုစွတ်လာပါတယ်။လင်ပါသားလေးအောင်အောင်ကို ဆေးတိုက်ပြီး တစ်ညလုံးလိုးခိုင်းချင်စိတ်တွေ ရွတက်လာပါပြီ။ မေမေလေးဘာတွေလုပ်နေတာလဲဗျာ။ ကြာလိုက်တာ။ ဆေးထည့်..အဲလေသံပုရာသီးညှစ်နေရသေးတာသားရဲ့။ ရော့ကုန်အောင်သောက်လိုက်.. .အောင်အောင်ကိုထူပြီး မထားထားက ကုန်စင်အောင်သံပုရာရည်များကို အကုန်မော့သောက်စေသည်။ ပြီးနောက်… မထားထားက သံပုရာရည်ခွက်ကို အခန်းထဲမှစားပွဲခုံပေါ်တင်လိုက်ပြီး သားရေ မေမေလေးတို့ဇာတ်ကားကြည့်ရအောင်။ ဘာကားလဲမေမေလေး… ဟင်း…ကြည့်ကြည့်ပေါ့ကွ…မင်းဖေဖေနဲ့ မေမေထားနဲ့ကြည့်နေကျဇာတ်ကားတွေ။ မထားထားက ဇာတ်ကားတစ်ခွေကိုစက်ထဲထည့်ကာ ဖွင့်ပြလိုက်သည်။ ထိုဇာတ်ကားများမှာကား အမေရိကန်အပြာကားသာဖြစ်တော့သည်။ ဇာတ်လမ်းပုံစံဆင်ထားသဖြင့် လိုးသည့်အခန်းများကစတင်မလာသေး။ သြော်…မေ့လို့..သားကို အိပ်ခါနီးမေမေနို့တိုက်ရဦးမှာဘဲ။ သူမကပြောရင်းဆိုရင်းအပေါ်အကျီကိုချွတ်ချလိုက်သည်။
အောင်အောင်ကားရင်တွေခုန်လာပြီ။ ဆေးရှိန်ကလည်းနည်းနည်းကြွလာပြီလေ။ မိထွေးဖြစ်သူမထားထားက ဘော်လီအကျီကိုပါချွတ်ချလိုက်ပြီး။ ထမိန်ကိုပါကွင်းလုံးပုံချလိုက်သည်။ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း မထားထား၏ ကိုယ်လုံးတီးအလှကြောင့် မိန်းမတစ်ယောက်ကို ကိုယ်လုံးတီးအတိုင်းမမြင်ဖူးသော အောင်အောင်အဖို့ ဆေးရှိန်ကလည်းတက်လာပြီဖြစ်သော ကြောင့် လီးကြီးက မာတောင်လာပြီး သူ့ဘောင်းဘီမှာပင်ဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်နေပြီ။ မထားထားက သူ့ဆီကိုလှုပ်လှီလှုပ်လှဲ့ဖြင့်လျှောက်လာသည်။ ခါးသိမ်သိမ်တင်ကားကား မိထွေးဖြစ်သူမထားထား၏အလှကရင်ပူစေပြီး တင်းရင်းကာ ပေါက်စီအလုံးကြီးခန့်ရင်နှစ်မွာပေါ်ဝဲကျနေသော မထားထားရဲ့ဆံနွယ်များကြောင့် သူ့ရင်တွေပိုခုန်လာသည်။ ဘာကြည့်နေတာလဲ…သားရဲ့မေမေလေးလှရဲ့မဟုတ်လား မထားထားရဲ့ ပေါင်တံဝင်းဝင်းမွတ်မွတ်နှစ်ချောင်းအလယ်တည့်တည့်မှာ အမွေးနုလေးတွေဖုံးလွမ်းနေတဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကို အောင်အောင်ကားမှင်တက်သလိုငေးကြည့်နေမိပါတယ်။ မထားထားက အောင်အောင်ခေါင်းကိုဆွဲယူလိုက်ပြီး သူမနို့နဲ့ အောင်အောင်ပါးစပ်ကိုတေ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အောင်အောင်ကား ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘဲတပြွတ်ပြွတ်နဲ့စို့တော့တာပါဘဲ။ ပြင်းထန်အားပါလှတဲ့ စို့ချက်တွေကြောင့်မထားထားလဲတအီးအီးတအားအားနဲ့ အရမ်းကိုကောင်းနေတော့သလိုသူမလက်ကလည်းအောင်အောင်ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။ အောင်အောင်ကိုတွန်းလှဲလိုက်ပြီးအောင်အောင်ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အောင်အောင်လီးကြီးက မိုးပေါ်ကိုထောင်ထသွားပါတော့တယ်။
အောင်အောင်ကလီးကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး မထားထားကသူမစောက်ပတ်နှင်တေ့လိုက်သည်။ နူးညံ့စိုစွတ်နေသောမထားထားရဲ့စောက်ပတ်ထဲလီးထိပ်ဖျားဝင်ပြီး ဒစ်မြုပ်သွားသည့်အချိန်မှာ အောင်အောင်တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးသွေပင်ထသွားသည်။ လီးတစ်ခုလုံးကိုမထားထားက ဖြည်းဖြည်းချင်းစောက်ခေါင်းထဲ ဖိသွင်းထိုင်ချလိုက်ချိန်တွင် တင်းကျပ်စီးပိုင်လှသောမေမေလေး ထားထားရဲ့စောက်ပတ်အတွင်းသားအကြောမြင်တွေက သူ့လီးကိုပြုတ်တူနှင့်ညှစ်ထားသည့်အတိုင်းပင်။ မေမေလေးထာထားက သူမစိတ်ကြိုက်အနေအထားသူ့လီးကို အဖုတ်ထဲစိမ်ထားပြီး အပေါ်မှ သဘောရှိတိုင်း ဆောင့်ချရန်အတွက်အောင်အောင်ရင်ဘတ်ကိုလက်များကိုအသာထောက်လိုက်ချိန်တွင် အောင်အောင်လက်များကလည်းအလိုလိုမြောက်တကိသွားပြီး မေမေလေးထားထားရဲ့ နို့နှစ်လုံးကိုအားရပါးရဆုပ်နယ်လိုက်ပါတယ်။ သား မေမေလေးနို့တွေကိုအားရပါးရဆုပ်နော်မထားထားကအောင်အောင်ရဲ့နို့ညှစ်ကျွမ်းမှုကို အသိအမှတ်ပြုသွားပါတယ်။ ပြီးတောါသူမအဖုတ်ထဲမြုပ်ဝင်နေတဲ့လင်ပါသားအောင်အောင်ရဲ့ လီးကြီးကလည်း တောင့်တင်းမာကျောပြီး ကြီးလည်းကြီးရှည်လဲရှည်တာကြောင့်အားရလှပါတယ်။
ဒါကြောင့်သူမလည်းအပေါ်ကခွပြီးစိတ်ကြိုက်ကို ဖင်ကိုကြွကြွပြီးလီးကိုအားရပါးရဆောင့်ဆောင့်ထည့်ပါတော့တယ်။ အားလားလား အိုးအိုး နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ညဉ်းညူသံတွေကလည်း အဆက်မပြတ်ပါဘဲ။ စွပ်စွပ်ပြွတ်ပြတ်ဘတ်ဘတ် မထားထားရဲ့ဖင်အိုးဝိုင်းဝိုင်းကြီးကလဲ အောင်အောင်ပေါင်နဲ့ရိုက်သံ။ သူမဆီးခုံနဲ့ အောင်အောင်လဥတွေရိုက်ခတ်သံကလည်း အဆက်မပြတ်ပါဘဲ။ ထို့အတူစောက်ရည်ကြည်လရေကြည်လေးတွေကလည်းထွက်လာတော့ စောက်ပတ်နဲ့လီးတေ့ပြီးဆောင့်ချလိုက်တိုင်း စောက်ရည်ကြည်တွေလရည်ကြည်တွေကြောင့် တစွပ်စွပ်တစ်ပွပ်ပွပ်အသံတွေကလည်းဆူညံနေပါတယ်။ မိန်းမတစ်ခါမှမလိုးဘူးတဲ့အောင်အောင်ရဲ့လူပျိုစစ်စစ်လီးကြီးကို သူ့မေမေလေးထားထားက အပီကိုဆွဲနေတာပါ။ စွပ်စွပ် အိုးအိုး မထားထားကအဆောင့်ကိုရပ်လိုက်ပါတယ်။ အောင်အောင်ဟာခနဲဖြစ်သွားပါတယ် ရင်ထဲမှာ။ မေမေလေးဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲဒီမှာကောင်းနေပြီ။ သားလေး မေမေဘေးကိုဒီလိုလုပ်ရတာကြိုက်လား။ ကြိုက်တယ်မေမေလေး ဆက်ဆောင့်ပေးပါ။
ဒါဆို မေမေလေးကိုနေ့တိုင်းလိုးပေးရမယ်နော်။ လိုးမှာစိတ်သာချ မေမေလေးခံချင်တဲ့ပုံစံပြော။ ဟုတ်ပြီ သားလေးကလိမ်မာသားဘဲ။ ဒါကြောင့်ချစ်တာ ကဲ စွပ်စွပ် ဘွတ်ဘွတ် ပြွတ်ပြွတ် ရှီးရှီး အား အားအိုးအင်း ဘတ်ဘတ် ပြွတ် စွပ် ဘွတ် ဘတ်ဘတ် စွပ်စွပ် ရှီးအားအိုးအင်း အားအ အောင်အောင်လီးထိပ်ဖျားကျင်တက်သွားပြီး မေမေလေးထားထားရဲ့ စောက်ပတ်နံရံတွေကို သူ့လရေတွေပန်းထွက်သွားချိန်မှာ မေမေလေး ထားထားရဲ့လည်ပင်းကြောတွေထောင်ထသွားကာ မျက်နှာလေးရှုံ့သွားပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲကစောက်ရည်တွေထွက်ကုန်ပါတော့တယ်။ မေမေလေးထားထားရဲ့နိုးဆွမှုကောင်းတာကြောင့်အောင်အောင်ရဲ့လီးကြီးကပြန်မတ်လာပါတယ်။ ထပ်လုပ်ချင်နေပြီလားသား.. .မေမေလေးအမေးကိုအောင်အောင်ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါဆိုမလုပ်ခင်သားကို မေမေလေးတစ်ခုထပ်သင်ပေးမယ်။ ဘာသင်ပေးဦးမှာလည်းမေမေလေးရဲ့။ ဒါကလည်းနေ့တိုင်းလုပ်ရမှာဘဲသားရဲ့။ သားငြိမ်ငြိမ်လေးနေ။မျက်လုံးမှိတ်ထား။ အောင်အောင်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ.. မေမေလေးထားထားက သူ့မျက်နှာပေါ်ပြောင်းပြန်ခွတက်လိုက်ပြီး လေးဖက်ထောက်ထားတာပါ။ မေမေလေးထားထားရဲ့စောက်ပတ်ကြီးက သူ့မျက်နှာနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာရှိနေတာပါ။ သူမမျက်နှာကလည်းသူ့လီးနဲ့တစ်တန်းတည်းပါဘဲ။ ဘာလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်သလိုလိုပါဘဲ။ အပြာကားတွေထဲကလိုပုံစံမျိုးပါ။ မေမေလေးစောက်ပတ်ကိုသူယက်ပေးရတော့မယ်…။ မေမေလေးကသူ့လီးကိုစုပ်ပေးတော့မယ်ဆိုတာသူရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။
သားအဲ့ဒါ ဆစ်စတီနိုင်းပုံစံလို့ခေါ်တယ်။ သားလေ့လာမှုအားဘယ်လောက်ကောင်း တယ်ဆိုတာမေမေလေးကြည့်မယ်။ အရည်လေးတွေစိုစွတ်နေတဲ့မေမေလေးထားထားရဲ့စောက်ပတ်က ညှီစို့စို့ရနံ့လေးကိုရှုရှိုက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအောင်အောင်စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားသွားပြီး..သူအပြာစာအုပ်ထဲမှာဖတ်နေကြပေမဲ့မလုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းချင်လာမိပါတယ်။ မေမေလေးက သူ့လီးဒစ်လေးကိုနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ငုံပြီး စုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ တင်ပါးကိုတုန်တက်သွားအောင်ကောင်းလာပါတယ်။ မေမေလေးကသူ့လီးကို အပြည့်ငုံပြီး အစွမ်းကုန်စုပ်တဲ့အချိန်မှာ အရမ်းကောင်းလွန်းတဲ့ လီးစုပ်ခံရမှုကိုသူခံစားလိုက်ရတာကြောင့် မေမေလေးကိုလည်းသူစာတွေ့နဲ့ဗွီဒီယိုကားတွေရဲ့ကောင်းမှုကြောင့် မြင်ရကြားသိထားတဲ့အတိုင်းမေမေလေးရဲ့စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခြမ်းကို လက်နဲ့ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး သူ့လျှာကိုထုတ်ကာ အမြောင်းအတိုင်း ထိုးထည့်ပြီး ယက်တင်လိုက်ပါတယ်။ ယက်ရတာ အနံသိပ်မဆိုးသလို မေမေလေးလီးစုပ်ပေးနေတာကလဲ သူ့စိတ်ကိုပိုနိုးထစေတာကြောင့် မေမေလေးရဲ့မာပြီးပြူထွက်နေတဲ့ စောက်စိကိုပါနှုတ်ခမ်းနဲ့တေ့ညှပ်ပြီးစုပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ပြွတ်…အိုးအိုး…မေမေလေးလီးစုပ်တာတောင်ခဏရပ်ပြီးအော်သွားကာ သူမပေါင်တံတွေတစ်ဆတ်ဆတ်တုန်သွားတာကြောင့်သူကျေနပ်သွားပြီး အဆက်မပြတ်ယက်ပါတော့တယ်.. မေမေလေး သူ့လီးကိုဆက်မစုပ်နိုင်တော့ပါဘူး… ကောင်းလွန်းလို့အော်ဟစ်ညဉ်းညူတဲ့သူမအသံတွေထွက်လာပါပြီ။ အိုး..လား.လား..ပြတ်ပြတ်ပြွတ်ပြွတ် ရှီးရှီး အမလေးသားရေဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ… ပြတ်ပြတ်ရှီးရှီး…အိုး။အိုး..အအ… အောင်အောင်က မေမေလေးထားထားရဲ့ဖင်ပေါက်လေးပါမကျန် လျှာစွမ်းပြလိုက်တော့ မေမေလေးအသည်းခိုက်သွားပြီပေါ့။ အ..အ..တော်ပါတေ့ာ..ပြတ်ပြတ်ရှီးရှီး..ပလပ်ပလပ်။..ပြွတ်ပြွတ် မေမေလေးရဲ့စောက်စိလေးကိုလျှာနဲ့တော့တော့ပေးပြီးအဆက်မပြတ် စုပ်ယက်လိုက်တော့ မေမေလေးထားထား လူးသွားပြီး အသားကုန်အော်ဟစ်ကာ စောက်ရည်တွေပါထွက်ကျကုန်ပါတော့တယ်။ ဟိုး..သားလေး ခုနကပုံစံမဟုတ်ဘူး…သားထလိုက်…ဒီလိုလုပ်ရမှာ.. ပက်လက်လှန်လိုက်သော အောင်အောင်မေမေလေးထားထားရဲ့ နောက်ထပ်လိုးပုံလိုးနည်းတစ်မျိုးသင်ပေးတာကိုနာခံနေပါတယ်။
မေမေလေးထားထားက မွေ့ယာပေါ်မှာလေးဖက်ထောက်ကုန်းလိုက်ပါတယ်။ ကုန်းလိုက်တာကြောင့် ၀ိုင်းစက်ပြီး စွင့်ကားလှတဲ့မေမေလေးတင်ပါကြီးနှစ်ခြမ်း ကိုကြည့်ပြီးအောင်အောင်ဘာဆက်လုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိပါဘူး။ ကဲသားအောင်အောင်… နောက်မှာ ဒူးတစ်ဖက်ကိုထောက်လိုက်ပြီးမေမေလေးရဲ့စောက်ပတ်ကိုသားလီးနဲ့တေ့လိုက်။ မေမေလေးစကားကြောင့်အောင်အောင်လဲနောက်ကနေသူ့လီးကို သူမစောက်ပတ်နဲ့တေ့ပြီး.. ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ…မေမေလေး….ဟင်းဟင်း… လူညံ့လေး.. အပြာစာအုပ်တွေဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီးညံ့လိုက်တာ မေမေလေးခါးကိုကိုချင်ကိုင် မေမေလေးနို့တွေကိုဆုပ်ချင်ဆုပ်ပြီးရင်ထည့်ပြီးဆောင့်တော့လေ….ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်နော်သား။ မေမေလေးကကြမ်းမှကြိုက်တာ။ သူမစကားကြောင့်အောင်အောင်လဲမေမေလေးထားထားရဲ့ အောက်ကိုကျနေတဲ့နို့နှစ်လုံးကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ညှစ်ရင်း လီးကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ စောက်ပတ်ထဲအဆုံးစိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ စွပ်..ဒုတ်..မေမေလေးရဲ့ဖင်ကြီးတုန်တက်သွားပါတယ်။ ဆောင့်ဆောင့်သားရေ..ဆောင့်ဆောင့်။ မေမေလေးထားထားက ဖင်ကိုအစွမ်းကုန်ကုန်းပေးတာကြောင့် အောင်အောင်လဲ…မညှာတော့ပါဘူး။ သူ့လီးကို ဆွဲထုပ်လိုက် အားကုန်ဆောင့်ချလိုက်နဲ့ မေမေလေးရဲ့အငမ်းမရအော်ဟစ်သံတွေကလည်းသူ့ကိုစိတ်ပိုကြွစေတယ်လေ။
ဖောင်းဖောင်း..ဘတ်ဘတ်..စွပ်စွပ်..ဒုတ်ဒုတ်..ပြွတ်ပြွတ်.. နို့ကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဆုပ်ပြီးလိုးသားရေ… မေမေလေးကြိုက်တယ်…အအ…. စွပ်စွပ်..ဘတ်..ဘတ်..ဖောင်းဖောင်း.။ အောင်အောင်လဥနဲ့ မေမေလေးဖင်ကြားတွေရိုက်ခတ်သံကထွက်ပေါ်လာသလို ဆောင့်ချက်တွေကအားပါလွန်းလို့ မေမေလေးဖင်လေးတုန်တုန်သွားတာကိုက အောင်အောင်အဖို့အရသာရှိလှပါတယ်။ မြန်မြန်လေး.ဆောင့်ပါသားရဲ့…မေမေလေးကောင်းနေပြီ အဖုတ်ကွဲချင်ကွဲသွားပေ့စေ စိတ်ကြိုက်ဆောင့်ပါသားလေး။ စွပ်စွပ်..ဒုတ်ဒုတ်..ပြွတ်ပြွတ်.ဘတ်ဘတ်… နောက်ဆုံးမှာတော့ အောင်အောင်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ မေမေလေးစောက်ပတ် အတွင်းသားတွေကို သူ့လရေတွေပန်းထွက်ကုန်ချိန်မှာ မေမေလေးလဲငယ်သံပါအောင်အော်ဟစ်ပြီးတစ်ချီထပ်ပြီးသွားပါတယ်။ သူ့လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ မေမေလေးနဲ့မွေ့ယာပေါ်ထပ်ရက်ကြီးကျသွားပြီး မေမေလေးကိုယ်ပေါ်ကိုသူလည်းမှောက်ကျသွားကာ မေမေလေးထားထားရဲ့စောက်ပတ်ထဲကလျံကျလာတဲ့သူမစောက်ရည်တွေနဲ့သူ့လရေတွေဟာ မွေ့ယာပေါ်မှာအကွက်ကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ သို့နှင့်အောင်အောင်နှင့်သူ့မေမေလေးထားထားတို့ကား ဦးအောင်စိုးပြန်မလာခင် နေ့ရောညရော လိုးပွဲဆင်နွဲခဲ့ကြသည်။
ဦးအောင်စိုးပြန်လာချိန်တွင်တော့ဟန်မပျက်နေခဲ့ကြသဖြင့် ဦးအောင်စိုးကလုံးဝမရိပ်မိခဲ့။ သို့သော်တဏှာကြီးလှသော သူ့မေမေလေးကား အစီအစဉ်သစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ထိုအစီအစဉ်ကြောင့် နောက်ပိုင်းဖြစ်လာမည့်ပြသနာများကိုအောင်အောင်မစဉ်းစားခဲ့မိပါ။ ကိုကြီး…ဦးအောင်စိုးကား ထားထား၏ ခေါ်သံကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ ကိုကြီးဒီနေ့အားလား… ဒီနေ့ကိုကြီး အလုပ်ကိစ္စချိန်းထားတာရှိတယ်ထားရဲ့.။ ဘယ်သွားမလို့လဲ။ထားထားကား ၀တ်ကောင်းစားလှများဝတ်ဆင်ထားသည်။ ဒီနေ့ ထားသူငယ်ချင်းမေမီကျော်တို့အိမ်မှာမွေးနေ့ပွဲရှိတယ်။ အဲ့ဒါကိုကြီးကိုလိုက်ပို့ခိုင်းမလို့။တကယ်ကိုမအားလို့ပါထားရယ်.. ညနက်မယ်ဆိုလဲ သားကိုလိုက်ပို့ခိုင်းမယ်လေထား။ ရပါတယ်ကိုကြီးရယ်… သူကလည်းသူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ညတိုင်းအပြင်ထွက်နေကျ။ ရပါတယ်..ထားကိုစိတ်မချပါဘူး။ သားရေ..သား.. ဖခင်ဖြစ်သူခေါ်သံကြောင့် အောင်အောင်အခန်းထဲမှထွက်လာသည်။
မင်းမေမေလေးကို သူ့သူငယ်ချင်းမွေးနေ့ရှိလို့တဲ့။ လိုက်ပို့လိုက်စမ်းပါကွာ…ဖေဖေလဲအလုပ်ရှိသေးလို့။ ဟုတ်.ဖေဖေ။ အောင်အောင်က အခန်းထဲဝင်ပြီးအ၀တ်အစားလဲကာ ဆိုင်ကယ်ကိုထုတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်…မေမေလေး သွားရအောင်လေ။ နှစ်ဦးသားဦးအောင်စိုးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာခဲ့သည်။ ဒေါ်မေမီကျော်အိမ်ရောက်တော့ ဧည့်ခံပွဲကလူတော်တော်စုံနေပြီ။ဟယ်…ထားထား..လာလာ…။ မေမီကျော်ကား ထားထားကိုမျက်စပစ်ပြလိုက်ပြီး။ ဒါနင်ပြောပြောနေတဲ့ နင့်အချစ်တော်လေးမဟုတ်လားလို့ တိုးတိုးလေးမေးလိုက်တာ အောင်အောင်မကြားလိုက်ပါဘူး။ကဲ..သားရေ အောက်ထပ်မှာဧည့်သည်တွေကပြည့်နေတာဘဲ မေမီက မေမေလေးတို့အတွက်အခန်းပြင်ထားတယ်တဲ့။ ဒေါ်ထားထားက တိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်။ အောင်အောင်အခုမှရိပ်မိသွားပါတယ်.. .မေမေလေးကသူမသူငယ်ချင်းအိမ်မှာ မွေးနေ့အကြောင်းပြပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင် အကွက်ဆင်ထားတယ်ဆုိုတာ။ ကဲ…သား ငေးမနေနဲ့..သွားရအောင်အပေါ်ထပ်ကို.. မေမေလေးက ဖခင်ဖြစ်သူပြန်ရောက်နေသဖြင့် သူ့လီးနဲ့ဝေးနေသောကြောင့် တော်တော်ဆာနေဟန်တူသည်။ ကျနော်လည်း ဘာမှတွေးမနေဘဲ မေမေလေးခေါ်ရာ လိုက်သွားပြီး နှစ်ယောက်သား အခန်းငယ်လေးထဲတွင် ကာမ စည်စိမ်း အပြည့်အဝကို ခံစားပါတော့သည်။နောက်ပိုင်းမှာလည်း မေမေလေး ခေါ် ဒေါ်ထားထားက သူမ ယားပြီး ခံချင်လာတိုင် ဖေဖေကို အကြောင်းတစ်ခုခု ပြပြီး နှစ်ယောက်သား ဟိုတယ်တွင် အဝ သွားသွားလိုးပြီးမှ အိမ်ပြန် ဖြစ်ကြတော့သည်။..ပြီးး